Part 1. iTunes ndabere photos?
Ọ bụrụ na ị ọhụrụ ka Apple na Apple ilekota, ị ga-ama na ị ga-nwere iji iTunes n'ihi na ihe niile. Ma ọ bụ na-ege ntị music ma ọ bụ syncing faịlụ, iTunes bụ ihe Apple ọrụ emefu ọtụtụ n'ime ha oge na mgbe ha na-na na ejikọrọ ha PC ha Apple ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-edegharị photos, ajụjụ nke nwere ike ịbịa ka gị na uche dị, ma ha na-echekwara na iTunes.
Ọfọn ee, iTunes Akwadoo elu foto gị mere na ọ bụrụ na ị furu efu gị ekwentị ma ọ bụ ya Nwela mebiri emebi, i nwere ike ịga nke ọma naghachi foto gị.
Part 2. iTunes ndabere na-echekwa photos ewepu igwefoto mpịakọta?
Ọ dịghị, ihe iTunes ndabere Akwadoo elu foto nke bụ ugbu naanị na igwefoto mpịakọta. Ndị ọzọ nile photos ga-iche iche kwadoo na gị usoro na ike-eweghachi mgbe e mesịrị.
Part 3. Olee nkwado ndabere na mpaghara iTunes foto na iji iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1: Mepee iTunes na gị usoro site abụọ na ịpị na ya akara ngosi. Ugbu a, Jikọọ na ngwaọrụ gị ka gị na kọmputa na enyemaka nke eriri USB.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, pịa na nhọrọ 'File' ugbu na ekpe top akuku nke ihuenyo. A dobe ala menu egosi. Pịgharịa gaa na ala na pịa on 'Devices' dị ka e gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo ị pịa 'Devices', a ọhụrụ menu egosi. Pịa 'Back Up'. Ozugbo ị pịa 'Back Up', ọ na-akpaghị aka na-emepụta a ndabere nke ngwaọrụ gị na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 4: ịgafe ego na nyochaa ma nkwado ndabere na mpaghara e kere, pịa na 'iTunes' nhọrọ ugbu a na-ekpe top wee pịa on 'Mmasị'. A ọhụrụ windo na-egosi dị ka e gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 5: Na 'Mmasị' window, pịa na nhọrọ 'Devices' ka e gosiri n'okpuru ma ị nwere ike ele nkọwa nke gị ndabere dị ka ndabere ụbọchị na oge.
Part 4. Olee ele iTunes ndabere na iji Wondershare Dr.Fone maka iOS
Wondershare Dr.Fone Maka iOS bụ ịtụnanya software nke na-enyere ị na-ele, naghachi na ịrụzi gị ndabere faịlụ na kwa idozi gị iOS usoro mbipụta.
Naghachi ehichapụ foto site na Igwefoto Roll, Photo Library, Photo Stream na ngwa.
Na-akwado iPhone 6, iPhone 6 Plus na ọhụrụ iOS 9.
Nzọụkwụ 1: Mepee Wondershare Dr.Fone maka iOS site na ịpị ya akara ngosi. Ozugbo ọ ga-emepe ya egosi na ị na atọ ụzọ naghachi na-ele ndabere faịlụ ya bụ 'naputa site na iOS ngwaọrụ', 'naputa site na iTunes ndabere File' na 'naputa site na iCloud ndabere File'. Pịa na nhọrọ 'naputa site na iTunes ndabere File' dị ka show n'okpuru.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo ị pịa 'naputa site na iTunes ndabere File', a ndepụta niile iTunes ndabere faịlụ ugbu a na kọmputa gị na-egosi na ihuenyo. Ị nwere ike ịhụ aha nke ndabere faịlụ, ụbọchị na oge nke e kere eke wdg Họrọ ndabere nke ị chọrọ ele site na ịpị na ya na N'ikpeazụ pịa na 'Malite iṅomi' nhọrọ ugbu a na nri ala akuku.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo scanning na dechara, ị nwere ike ele ndị niile na ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ dị ka ozi kọntaktsị, ndetu, oku log, foto wdg Ị nwere ike ịlele dum ọdịnaya dị ka show n'okpuru.
Part 5. Olee nkwado ndabere na mpaghara iPhone data na kọmputa selectively
Wondershare TunesGO bụkwa ịtụnanya software site Wondershare otu nke na-enyere gị aka ndabere gị faịlụ, ozi, kọntaktị, media faịlụ, iTunes n'ọbá akwụkwọ wdg nnọọ mfe.
Full dakọtara na iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS na-agba ọsọ iOS 9/8/7/6/5.
Nzọụkwụ 1: Mepee Wondershare TunesGO software na gị usoro site click na ya akara ngosi. Ozugbo ị na-emeghe software, ugbu a jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị usoro eji eriri USB. Ọ ga-ewe oge ụfọdụ iji chọpụta ngwaọrụ gị. Ozugbo ahụrụ, ngwaọrụ gị ga-gosiri na ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Na menu na n'aka ekpe, dị iche iche ige bụ ugbu nke ndabere faịlụ dị ka media, playlist, kọntaktị wdg Pịa na ihe ọ bụla nke na udi ele nkọwa. Ka ihe atụ ị chọrọ ndabere photos gị na kọmputa, wee pịa on 'Photos'. A menu-egosi na ihuenyo.
Nzọụkwụ 3: Mepee nchekwa onye photos ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara site abụọ na ịpị na ya na ịpị na ya. A ọhụrụ menu ogosiri-egosi foto na na nchekwa. Họrọ photos ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara na click on 'Export ka' nhọrọ sochiri 'Mbupụ na My kọmputa' dị ka e gosiri n'okpuru.
Nzọụkwụ 4: A ọhụrụ windo na-egosi na-arịọ maka ebe ebe ị chọrọ ka ndabere faịlụ. Agagharị na họrọ ọnọdụ wee pịa on 'OK' nhọrọ. Ndị a wil ịmepụta ndabere nke faịlụ na ị họrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 5: The ọnọdụ mmanya na-egosi na ọganihu nke gị bupu. Ozugbo ọ esịmde 100% gị faịlụ na-exported ọma. Pịa 'OK' na Ikwupu ngwaọrụ gị.
> Resource> iTunes> Ò iTunes ndabere Photos?